Gabaasa Gammachuu Addunyaa bara 2015tiin Itoophiyaan sadarkaa 122ffaa irratti argamti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Gabaasa Gammachuu Addunyaa bara 2015tiin Itoophiyaan sadarkaa 122ffaa irratti argamti
Gabaasa Gammachuu Addunyaa bara 2015tiin Itoophiyaan sadarkaa 122ffaa irratti argamti
Itoophiyaan sadarkaa 122ffaa irratti kan argamtu biyyoota qorannoon irratti geggeefame 158 keessaa
Gabaasni Gammachuu Addunyaa (Wolrd Happiness Report) 2015 ifa ta’e. Akkuma maqaan isaa ifatti mul’isutti gabaasni kuni kan xiyyeefatu ummanni biyyoota addaddaa keessa jiraatan sadarkaan gammachuu isaanii maal akka fakkaatu agarsiisuu irratti.
Gabaasni kuni biyyoota addunyaa kallattiifi sadarkaa guddinaa garagaraa irratti argaman keessatti kan geggeeffameedha. Akka Gabaasa Gammachuu Addunyaa-GGA bara 2015itti Itoophiyaan kan argamtu sadarkaa 122ffaa irratti. Muummee gabatee GGA bara kanaa irra wolduraa duubaan kan jiran Siwiizerlaand, Ayislaand, Denmaark, Noorweeyiifi Kanadaadha.
Gabaasni kuni kan ifa godhe ummanni ardii Awurooppaa keessa jiraatan kanniin gammachuu guddaa qabaniidha. Sadarkaa 10 jalqabaa keessa biyyoonni ardii Awurooppaa 7 jiraachuun kanaaf raga gayadha. Ameerikaan kan argamtu, akka GGA 2015tti, sadarkaa 15ffaa irratti. Biyyoonni ummanni isii gammachuu dhabuun tokkoffaa Toogoodha. Sadarkaa GA 2015 jalaa ol Burundiifi Sooriyaan wolduraa duubaan sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa irratti kan argaman. Afrikaa keessatti biyyoonni sadarkaa ol’aanaa irra jiran, akka GGA 2015, Liibiyaa (sad.63ffaa), Algeeriyaa (sad.68ffaa)fi Morishiyes (sad.71ffaa) dha.
Gabaasni kuni sadarkaa gammchuun ummata biyya tokkoo irrati argamu kan shallagu qabxiilee 6 irratti hundaayuudhaan: Omisha biyyaa (GDP), umrii ummatichaa (Life expectancy), nama irratti erkatan qabaachuu, bilisummaa akka fedhii ufiitti jiraachuu qabaachuu, dhabamiinsa malaan maltummaafi arjummaadha. Ifatti kan mul’atu, gammachuun ummata biyya tokoo guddina diinagdee, bulchiinsa gaariifi hawaasummaa irratti kan hundaayu ta’uu isaati kan gabaasni kuni addeessu.
Gabaasni Gammachuu Addunyaa inni jalqabaa kan baye bara 2012tti. Isa bara 2015 kan dura tureen adda kan godhu sadarkaa gammachuu ummanni biyya tokkoo qabu umriin, saalaafi naannoon agargar baasee kaayuu isaati.
Kayyoon gabaasa GGA mootummoonniifi kanniin imaammata diinagdee, siyaasafi hawasummaa baasan sadarkaa gammachuu ummata isaanii baranii tankaarfii haalaafi jireenya ummata isaanii fooyyosu fudhachuuf akka isaan gargaaruuf ta’uu isaa ibsu kanniin gabaasa kana baasan.
gabaasa gammachuu addunyaa
WOLRD HAPPNIESS REPORT
Previous articleBaqattoonni Somaaleefi Afgaanistaan 14 baaburaan Masedooniyaa keessatti ajjeefaman
Next articleUN HRs: Continued detention of Ethiopian journalists unacceptable